Waxsoosaarka Nidaamka Dhismaha Dabaqa Shiinaha | Yi'an
Dabaqa isku-dhafan waa shey loo soo saaray Wiskind si loo daboolo baahiyaha dhismayaasha la taaban karo ee la xoojiyay. Badeecada waxaa lagu soo rogay culeyska dhismaha inta lagu gudajiro wajiga dhismaha, waxayna lashaqeysaa iskaashi la taaban karo oo wajiga adeega ah si ay uqaato culeyska adeegga, sidaas darteedna awood u siineysa in ciyaar buuxda ay siiso astaamaha birta iyo walxaha shubka ah. Waxay ku raaxeysataa faa'iidooyinka miisaanka fudud, xoogga sare, adkaanta adag, dhismaha fudud, soosaarida wax soosaarka caadiga ah, iyo inbadan.
Dabaqa sagxadda (sagxadda birta, dhismaha saxanka birta ah ee la aqoonsan yahay) waxaa lagu sameeyaa duub sameysmaya xaashi bir ah oo galvanized ah, qaybtiisa iskutallaabtiisuna waa V-qaab, U-qaabeysan, trapezoidal ama mowjado isku mid ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa sidii template joogto ah. , Sidoo kale waxaa lagu dooran karaa ujeedooyin kale. Dabaqa isku jira, sagxadda sagxadda, sagxadda birta, saxanka birta ee faafaahinta, guddiga sagxadda, sagxadda dhulka ee birta ah, looxyada isku dhafan ee isku dhafan, sagxadda dusha sare ee birta, dusha sagxadda galvanized, sagxadda dusha sare ee dusha sare, isku darka sagxadda dhulka, iskudhafka dusha sare taarikada birta ah, looxyada dhulka la isku daray, iwm.
1. Si loo buuxiyo shuruudaha dhismaha degdega ah ee qaabdhismeedka birta ugu muhiimsan, waxay ku siin kartaa goob shaqo oo adag muddo gaaban, waxayna qaadan kartaa dhismaha socodka ee lagu dhajinayo taarikada birta ah ee dabaqyada kala duwan leh iyo ku shubidda lakabyo shubka ah oo lakabyo ah.
2. Marxaladda adeegsiga, sagxadda sagxadda waxaa loo isticmaalaa sidii birta siligga ah ee sagxadda shamiitada, taas oo sidoo kale hagaajinaysa adkaanshaha dhulka oo keydineysa qadarka birta iyo shubka.
3. Dusha sare ee dusha sare ee looxyada cajaa'ibka leh ayaa ka dhigaysa awoodda isku xidhka ugu sarreeya inta u dhexeysa sagxadda sagxadda iyo shubka, si ay labadoodu u sameysmaan guud ahaan, feeraha adadag oo adag, si nidaamka sagxadda sagxaddu u yeesho awood qaadasho sare.
4. Xaaladda cantilever hoosteeda, sagxadda sagxadda waxaa loo isticmaalaa oo keliya tusaale joogto ah. Dhererka cantilever waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo astaamaha qaybaha kala duwan ee sagxadda sagxadda. Si looga hortago dildilaaca saxanka kor u kacaya, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qalabeeyo taageerada xoojinta taban sida ku cad naqshada injineerka qaabdhismeedka.
Waxyaabaha Cutub Dhumucdiisuna Nooca
Guddi la cayimay kg / m ² 0.81.01.2 8.7210.9013.08 51.6464.5577.50 16.5620.7024.82
Qaybta Dareenka Inertia cm⁴ / m 0.81.01.2 9.0811.3513.62 51.9070.6081.89 16.8622.2228.41
Qaybta daqiiqad diidmo cm³ / m 0.81.01.2 10.4513.0815.70 127.50158.20190.10 33.3441.6950.04
Ballad wax ku ool ah mm - 720 600 600
Gudiga la cayimay kg / m ² 0.81.01.2 11.6314.5417.45 12.3115.3918.47 13.6317.0420.44
Qaybta Dareenka Inertia cm⁴ / m 0.81.01.2 73.2091.50109.20 98.60123.25147.90 89.34111.13132.70
Qaybta daqiiqad diidmo cm³ / m 0.81.01.2 14.8118.5222.22 22.4128.0133.61 18.9823.6228.24
Ballad wax ku ool ah mm - 510 540 720
Hore: Golaha Wasiiradda Dharka Dharka nadaafadda
Xiga: 360 ° xirashada nidaamka saqafka 470